तीन हात र चार वटा खुट्टा भएको अनौठो बच्चा जन्मिएपछि हेर्ने मासिको भिड ! काठमाडौ, असार १०-Yes भारतमा अनौठौ बच्चाको जन्म भएको छ । २४ वर्षीया महिलाले तीनवटा हात र चारवटा खुट्टा भएको बच्चाको ज….. – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/तीन हात र चार वटा खुट्टा भएको अनौठो बच्चा जन्मिएपछि हेर्ने मासिको भिड ! काठमाडौ, असार १०-Yes भारतमा अनौठौ बच्चाको जन्म भएको छ । २४ वर्षीया महिलाले तीनवटा हात र चारवटा खुट्टा भएको बच्चाको ज…..
काठमाडौ, असार १०-Yes भारतमा अनौठौ बच्चाको जन्म भएको छ । २४ वर्षीया महिलाले तीनवटा हात र चारवटा खुट्टा भएको बच्चाको जन्म दिएकी हुन् । उक्त बच्चाको जन्म भएपछि अस्पतालमा हेर्ने मानिसको भिड लागेको थियो । तिम्ल्याहा बच्चालाई जन्म दिएकी उनले दुईवटा हात र खुट्टा जोडिएको बच्चालाई जन्म दिएकी हुन् ।